मलेसियामा डिउटि गरेर फर्किदा वसको सिटमै एक नेपाली मजदुरको मृत्यु !! हार्दिक श्रंदान्जली – Taja Khawar
मलेसियामा डिउटि गरेर फर्किदा वसको सिटमै एक नेपाली मजदुरको मृत्यु !! हार्दिक श्रंदान्जली
प्रकाशित मिति: शनिबार, भाद्र १९, २०७८ समय: २३:५७:२७
दिनेश खड्का खप्तडि/ क्वालालम्पुर/१८ भाद्र २०७८, शुक्रवार// मलेसियामा एक मजदुरको गाडिको सिटमा वसेकै ठाउँमा मृत्यु भएको छ । रामेछाप जिल्लाको खाडँदेवि गाउँपालिका वडा न २ का ३३ वर्षका पुर्णलाल मोक्तानको शुक्रवार विहान मृत्यु भएको हो ।
उनको के कारणले मृत्यु भएको हो पोसमार्टम पश्चात थाहा हुने छ । यस अगाडि उनी कुनै पनि रोग नदेखिएको र केहि पनि औषधीहरु प्रयोग नगरेको साथीहरुले जानकारी गराएका छन । रास्ट्र डेली बाट साभार गरिएको
Last Updated on: September 4th, 2021 at 11:57 pm